Paunenge iwe wafunga kuishandisa | Ota Ward Hall Aplico
Ota Ward Horo Aplico Menyu
Vadivelu Comedy Studio AB
Paunenge uchishandisa horo hombe, horo diki, uye nzvimbo yekuratidzira
Kana kana iwe ukashandisa zvivakwa pane zvinovaraidza zvinoonekwa sezvakakodzera pane manejimendi manejimendi iri, pane tarisiro yemwedzi mumwe risati rasvika zuva rekushandisa seyakajairika mutemo unounza magwaro anotevera, ndapota enda kumabharaki nemisangano.
Chirongwa kana kufambira mberi chati, pepa, chengetedzo chirongwa, yekubvuma tikiti kana nhamba ine tikiti (semuenzaniso)
Pamusoro peizvo zvataurwa pamusoro, zviitiko muhoro hombe zvinosanganisira vanodhirowa padanho, mifananidzo yemwenje, uye acoustic madhirowa.
(Kana usina kusarudza, ndokumbira utizivise zita remunhu anotungamira uye neruzivo rwekuonana.)
Paunenge uchishandisa studio
Ndokumbirawo uve nemusangano nevashandi nezve maratidziro ekamuri uye nenjodzi zvivakwa zvekushandisa kanenge mazuva maviri zuva rekushandisa risati rasvika.
Zvigadzirwa hazvigone kutengeswa mu studio
Kushandiswa kwemoto, nezvimwe. Kamata Moto Dhipatimendi Kudzivirira Chikamu
2-28-1 Kamatahoncho, Ota-ku Runhare: 03-3735-0119
Security nezvimwe. Kamata Police Station
2-3-3 Kamatahoncho, Ota-ku Runhare: 03-3731-0110
Kutumira kwezviziviso / zviziviso
Ndokumbira utizivise kana iwe uchida kutumira chikwangwani.
Ruzivo rwezviitiko runogona kutumirwa mahara pamagazini yemashoko yakaburitswa neOta Ward Cultural Promotion Association uye newebsite (Zvichienderana nezviri mukati, hatigone kuzvigamuchira)
Pazuva rekushandisa, ndokumbira upe fomu yekubvumidza yekushandisa kunzvimbo yekugamuchira usati washandisa kamuri.
Mukugadzirira kuitika kwenjodzi, ndapota tora matanho angangoita akadai sekubuda mukutungamira kwevashanyi, kusangana kwekukurumidzira, rubatsiro rwekutanga, nezvimwewo, nekuita musangano wakadzama nevashandi uye nekumisazve vashandi.
Kune imba yevana pauriri hwekutanga.Kana iwe uchida kuishandisa, ndapota zivisa vashandi.Ndokumbira utarisise parutivi rwemushandisi.
Ndokumbira utore kumba chero marara anogadzirwa nekudya nekumwa, uye marara zvigadzirwa zvakagadzirwa padariro.Kana zvichinetsa kuenda nazvo kumba, tichazviongorora kuti tibhadhare, saka ndokumbirawo utizivise.
Murongi anofanira kuronga vashandi vanodiwa pakuronga nekutungamira vashanyi, kusimudza, kuvaraidza, nezvimwe.Zvichienderana nechiitiko, murongi anogona kugadzirira vashandi vemuhara, mwenje, kurira, nezvimwe.
Kana zvichitarisirwa kuti nhamba huru yevaenzi ichauya nguva yekuvhura isati yasvika, kana kana paine mukana wekuvhiringidzika panguva yechiitiko ichi, ibasa remurongi kupa varongi vakakwana.
Kusvuta kunorambidzwa muchivako chose.Usadye, kunwa kana kuputa kunze kwenzvimbo dzakatarwa.
Ndokumbirawo kuti mushandise iyo wadhi-inoitwa hwema pasi pevhu yekupaka (kureba muganho 2.1 m).
Murongi anozobhadharisa mahara ekupaka pazuva, asi pane muganho pane huwandu hwemotokari zvichienderana nenzvimbo.
Yese kupaka yevashandisi vese ichabhadharwa.
Mawiricheya-anowanikwa akawanda emakamuri ekuzorora ari pane yekutanga uye yekutanga pasi pevhu uye muhoro hombe (1st pasi).
Kana iwe ukapinda uchibva kune yepasi pekupaka lot, ndapota shandisa erevheta.
Kugadziriswa / kuongorora / kuchenesa yakavharwa / kwenguva pfupi yakavharwa